चीनसँगका सम्झौताः कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? - Sagarmatha TV
चीनसँगका सम्झौताः कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ?
काठमाडाैं, ३ बैशाख । उत्तरी छिमेकी चीनले दुईदेशीय रेलमार्ग निर्माणसहित अन्य आर्थिक सहकार्य प्रस्ताव गरेको धेरै समय भए पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । विगतमा भएका थुप्रै सम्झौता र समझदारी अलपत्र छन् । यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सोमबार चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन् ।
दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयमा पुनरावलोकन गर्न बनेको उक्त संयन्त्रको बैठक ४ वर्षपछि बसेको थियो । माघमा अर्को बैठक बेइजिङमा बस्ने भनिए पनि बसेन ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
20 April, 2018 at 1:58 pm